के तपाइँ स्पाम रोक्न चाहानुहुन्छ? Semalt विशेषज्ञ स्प्याम फिल्टरहरू कसरी रोक्ने बारे सुझावहरू परिभाषित गर्दछ
जब यो अनलाइन मार्केटिंग र अन्य कार्यहरूको लागि आउँदछ, महत्वपूर्ण कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नु अघि सबै आवश्यक जानकारी जम्मा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। साइबर-हमलामा शिक्षा कम्पनीको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, व्यवसायहरु कसरी पत्ता लगाउन र स्प्यामिंग ईमेल बेवास्ता गर्न को लागी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथ साथै अन्य अनलाइन सामग्री। यी सरल प्रविधिहरूले कम्पनी र यसका कर्मचारीहरूलाई लाखौंको स्रोतहरू बचाउन मद्दत गर्न सक्दछन् जुन सफल स्प्याम आक्रमणको घटनामा कमजोर हुन्छन्। यसले कम्पनीलाई ह्याकहरू र स्प्याम हमला गर्ने पीडालाई पनि बचाउन सक्छ जसले साइबर अपराधीहरूलाई व्यापार हराउँछ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, लिसा मिशेलले कसरी स्पामसँग व्यवहार गर्ने भन्ने बारे महत्वपूर्ण जानकारी दिन्छन्।
१. ईमेल ठेगाना।
ईमेल ठेगाना व्यक्तिगत सम्पर्क जानकारी हो। यो गोप्य रहनु पर्छ। अनलाइन प्रयोगको मामलामा, तपाइँको ईमेल ठेगाना वेबसाइट वा अनलाइन फारममा नदिनुहोस् जसको मौलिकता र विश्वसनीयता शंकास्पद छ। अधिक स्प्यामरहरू ईमेल पठाउन ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्दछ। तपाइँको ठेगाना सुरक्षित राख्दा तपाइँमा पुग्न उनीहरूलाई एक चरण राख्छ। तपाईंले स्प्याम ईमेलहरूमा संलग्न संलग्नक खोल्नु हुँदैन। तिनीहरूमा ट्रोजन्स हुनसक्दछ, जसले पीडितको कम्प्युटरमा धेरै प्रतिकूल कार्यहरू गर्न सक्दछ।
२. सदस्यता रद्द नगर्नुहोस्।
जब स्प्याम ईमेलले लिंकहरू समावेश गर्दछ, कुनै कुराको सदस्यता रद्द नगर्नु महत्वपूर्ण छ। सबै भन्दा पहिले, यो कुनै पनि सदस्यतामा भाग नलिएकोले यो एक धोखा हो। यसका साथै, यस प्रक्रियाले स्प्यामरलाई पुष्टि गर्दछ कि ईमेल ठेगानाले मैले वैधतामा भविष्यमा अन्य आक्रमणहरू गर्न प्रयोग गर्दछ। यसका साथै यसमा लिंकले तपाईंको पीसीमा अन्य खराब कार्यहरू गर्न सक्दछ धेरै असंख्य क्षतिहरू गरिरहेको।
Never. स्प्याम ईमेलमा लिंकहरू कहिल्यै क्लिक नगर्नुहोस्।
यी लिंकहरूमा मालवेयर हुन सक्छ वा स्मार्टफोनमा डायलिंग कोड लागू गर्न सक्दछ। अन्य केसहरूमा, यसले स्प्यामरलाई पुष्टि गर्दछ कि ईमेल ठेगाना मान्य छ। यो विकल्पले स्प्यामरलाई मान्य लक्ष्यका साथ छोडिन्छ जुन उनीहरू अधिक स्प्यामिming उपकरण वा फिसि pages पृष्ठहरू पठाउन सक्दछन्। यसबाहेक, यी लिंकहरूले ह्याकि tools उपकरणहरू समावेश गर्न सक्दछ जुन तपाईंको ब्राउजरहरूलाई टाढाको ब्याकइन्ड कम्प्युटरहरूमा हुक गर्न सक्दछ, र व्यक्तिगत जानकारीको धेरै पहुँच गर्न सक्दछ।
Work. कामका लागि व्यक्तिगत ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्।
व्यक्ति जो व्यक्तिगत वेबसाइटहरु को लागी, यो महत्वपूर्ण छ कि यसमा आफ्नै काम प्रकाशित गर्नु हुँदैन। यो परिहार किनभने हेकरहरू र स्क्यामरसँग उपकरणहरू छन् जुन वेबसाइटबाट ईमेलहरू प्राप्त गर्न र स्प्याम आक्रमणको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंलाई ईमेल सेवाहरू सम्मिलित गर्न आवश्यक पर्दछ भने, यो प्रकार्यका लागि नि: शुल्क ईमेल सेवाहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
धेरै व्यवसायहरू र व्यक्तिहरू खराब स्पाम आक्रमणहरूको लागि पर्दछन्। धेरै जसो केसहरूमा स्प्यामले असंख्य व्यर्थका प्रयासहरू समावेश गर्दछ, जुन एक असुरक्षित पीडितलाई फेला पार्न सफल हुन्छ। नतीजाको रूपमा, श्रमिकहरू र फर्मका विभिन्न निकायहरू साइबर-हमलाको साथसाथै दुर्भावनापूर्ण इरादेका साथ पार्टीहरूद्वारा अन्य ह्याकहरूसँग जोखिममा पर्दछन्। शिक्षा र जागरूकता कम्पनी धेरै समय बचाउन सक्छ, संसाधन, प्रतिष्ठा र पीडित जो साइबर अपराधीहरू सफल हमलाहरूमा हुन सक्छ। यस गाईडमा, स्प्यामहरू पत्ता लगाउन र बेच्न सक्ने धेरै तरिकाहरू उपलब्ध छन्। यी प्राविधिकहरूबाट, तपाईं यी ईमेलहरूदेखि सावधान हुन सक्नुहुन्छ, र गहिरा समस्यामा नपर्न उचित प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ।